Telefonia Ip Server ngayinye amafasitela iseva configurado
Y amafasitela iseva con plataforma softswitch telefonia ip.
Voipswitch inawo wonke amathuluzi okudingayo ukuze isevisi ye-Inthanethi. It has izakhiwo ukulawula Administrator, Switchboards futhi softphones okuxhumana. Ngakho Softswitch inikeza engcono nakho ku-intanethi ezokuxhumana. Kuyinto isiteji Amazing.
Own Business ip wefoni yakho manje kungenzeka nge kakhulu oluphelele iseva platform emakethe futhi. ServerVoIP kwenza kube nokwenzeka garatizado saka- ukusingatha ngaphandle ubuchwepheshe lobuchwepheshe, ngokuvumela iqale ukusebenza kusuka induduzo ekhaya lakho futhi wenze imali kweso.
Ephelele kakhulu futhi functional software VoIP wefoni.
It ServerVoip babe enguqulweni yamanje ye-Software efakwe Windows Server VoipSwitch 2008, futhi kwezinye amaseva (upscale) Windows Server 2012.
Ukwazi izici >>
Advanced Ukuphathwa uhlelo
wefoni ibhizinisi le-IP.
Isiteji SoftSwitch yakhelwe ukuphatha estña, gestione y monitoree sus herramientas sin complicaciones o conocimientos técnicos.
- ubulili Amakhasimende
- Faka Abanikezeli
- Amafomu Distributors noma nabadayisi
amathuluzi Kubuyekeziwe yakho
Amakhadi wokufonela y Callshop
izinkokhelo / Izinkokhelo Online
sokukhokha / Invoyisizi
Xoxa zu VoIP Shintshela
usebenzisa platform VoipSwitch kuyinto umhlinzeki global amaminithi amakhasimende wakho ukubiza landlines nomakhalekhukhwini kuphi emhlabeni, ne amazinga best noma amanani ofuna ukuba ukushaja.
Ibhizinisi lakho itholakale emhlabeni wonke nge
amafasitela Server iseva amisiwe platform IP zefoni
Khetha VoIP Server okudingayo ukuze ifoni yakho.
"Proveemos de los mejores VoIP amaseva nge VoipSwitch I-IP telephony inkampani kusukela 2008 kuzo zonke izingxenye zomhlaba"
MAHHALA Isahluko 10 kanye Discover
Yimalini ungakwazi ukuthola inkampani ifoni yakho?
Lungiselela VoipSwitch yakho Server impela indlela ofuna amakhasimende wakho, abahlinzeki nabasabalalisi.
Videotutoriales ku handling HD Ipulatifomu (HD) ukuze ufunde kabanzi mayelana IP telephony (VoIP).
kwesigaba Imiqophi >
Thola izimpendulo mayelana nenkampani ngayinye yakho. Khuluma nabantu asebenesikhathi umeluleki ukusula ezibakhathazayo.
VoipSwitch for telephony Inthanethi isevisi amamojuli yamakholi ukuba landlines nomakhalekhukhwini emhlabeni.
Buka Properties >
© 2008 - 2018 ServerVoIP.com Wonke amalungelo agodliwe
Imigomo Nemibandela Política de Privacidad Anti spam Yemfihlo-DMCA Disclaimer FTC isitatimende Inqubomgomo Yembuyiselo
Server VoIP It is a service ServiMatango.com